CHZ လမ်းမီးအမျိုးအစားများ၊ လက္ကားပြင်ပအလင်းရောင်ရောင်းချသူများ
CHZ Lighting - 2013 ခုနှစ်မှစတင်၍ LED ပြင်ပအလင်းရောင်တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သူများ။
Ac Led Street Light ၊
ဆိုလာ LED လမ်းမီး
အားကစားကွင်းက Flood Light က ဦးဆောင်တယ်။
CHZ Lighting သည် LED မီးချောင်းများထုတ်လုပ်ရာတွင် အတွေ့အကြုံ 16 နှစ်ရှိသော အလင်းရောင်နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ လိုက်နာပါ။"ထိပ်တန်းနည်းပညာ၊ ထိပ်တန်းအရည်အသွေး" စံနှုန်း၊ ထုတ်ကုန်အသစ်များကို ဆက်လက်ဖန်တီးပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သောအလင်းရောင်လမ်းကြောင်းကို ဦးဆောင်ပါ။ CHZ Lighting မှ ထုတ်လုပ်သည့် ထုတ်ကုန်များတွင် အဓိကအားဖြင့် LED လမ်းမီးများ၊ LED အားကစားကွင်းမီးများ၊ LED ဥယျာဉ်မီးများ၊ LED ရေလွှမ်းမိုးမီးများနှင့် LED မြင့်မားသော bay မီးများ ပါဝင်သည်။ အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ကြမ်းများနှင့် အဆင့်မြင့် ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများကို အသုံးပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့ အခိုင်အမာ တောင်းဆိုထားပြီး အရည်အသွေးမြင့် မီးအိမ်အမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်ရန် အာရုံစိုက်ထားသည်။ ထုတ်ကုန်များ၏ အဓိကအသုံးချမှုအခြေအနေများမှာ အဝေးပြေးလမ်းအလင်းရောင်၊ အကိုင်းအခက်လမ်းအလင်းရောင်၊ လမ်းမီးအလင်းရောင်၊ ဝင်းအလင်းရောင်၊ ပန်းခြံအလင်းရောင်၊ လေးထောင့်အလင်းရောင်၊ ကားရပ်နားရန်နေရာအလင်းရောင်၊ ဆိပ်ကမ်းအလင်းရောင်၊ အိမ်တွင်းနှင့် အပြင်ဘက် အားကစားကွင်းအလင်းရောင်၊ စက်ရုံအလင်းရောင်၊ အလုပ်ရုံအလင်းရောင်၊ ဂိုဒေါင်အလင်းရောင်၊ စသည် .
အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဦးဆောင်သော လမ်းမီး ENEC TUV CB ROHS CHZ-ST29 ထုတ်လုပ်သူ | CHZ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဦးဆောင်သော လမ်းမီး ENEC TUV CB ROHS CHZ-ST29 စျေးကွက်ရှိ အလားတူထုတ်ကုန်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ၎င်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်၊ အရည်အသွေး၊ အသွင်အပြင်စသည်ဖြင့် နှိုင်းယှဉ်၍မရသော ထူးထူးခြားခြား အားသာချက်များရှိပြီး စျေးကွက်တွင် နာမည်ကောင်းရရှိထားသည်။CHZ ၏ ချို့ယွင်းချက်များအား အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါသည်။ ယခင်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၎င်းတို့ကို စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်စေသည်။ Professional led လမ်းမီး ENEC TUV CB ROHS CHZ-ST29 ၏သတ်မှတ်ချက်များကို သင့်လိုအပ်ချက်အရ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။CHZ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဦးဆောင်သော လမ်းမီး ENEC TUV CB ROHS CHZ-ST29 ထုတ်လုပ်သူများ၊ CHZ အလင်းရောင်သည် LED မီးချောင်းများ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး ISO9001၊ ISO14000 နှင့် ISO45001 လက်မှတ်များကို ကျော်ဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်ကို ဦးတည်ချက်အဖြစ် အမြဲတမ်း လိုက်နာခဲ့ပြီး စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ကုန်အသစ်များကို အဆက်မပြတ် တီထွင်ခဲ့သည်။CHZ အလင်းရောင် ပြင်ပ LED လမ်းမီး CHZ-ST29 ၏ ပြိုင်ဆိုင်မှု အားသာချက်များ1. အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး စျေးကွက်အများစု၏ လေလံဆွဲမှုလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်း။ ဤအချက်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤထုတ်ကုန်၏ ပြီးပြည့်စုံသော စမ်းသပ်မှုနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို လုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်သည်- ENEC၊ CE၊ EMC၊ LVD၊ TUV၊ ROHS၊ WEEE၊ IP66၊ IK10၊ 10KV/20KV၊ IES၊ TM-21+ISTMT၊ LM-82၊ SALT-FOG TEST၊ BOM၊ EN62471-R၊ LM79 နှင့် အသေးစိတ်လုပ်ဆောင်မှုလက်စွဲများကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။2. ပစ္စည်းကိရိယာသည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး အလင်းအရင်းအမြစ်၊ ယာဉ်မောင်းနှင့် ကေဘယ်လ်များသည် လူသိများသောအမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။ အလုပ်သမားများ၏ 60% ကျော်သည် 4-5 နှစ်အတွင်းကျွမ်းကျင်လုပ်သားများဖြစ်ကြပြီးထုတ်ကုန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်တည်ငြိမ်သည်။3. ကောင်းမွန်သော တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် အပူစွန့်ထုတ်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်၊ ရေစိုခံခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံခြင်းနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းများ။ အလုပ်အပူချိန် -35°C မှ +50°C အထိ အလုပ်မလုပ်ဘဲ နာရီ 50,000 ထက် ပိုနေနိုင်ပါသည်။ အာမခံကာလသည်5နှစ်ဖြစ်သည်။4. အမြန်ပို့ဆောင်မှု၊ နမူနာများအတွက် 3-5 အလုပ်လုပ်ရက်၊ မှာယူမှုပမာဏပေါ်မူတည်၍ ငွေပေးချေပြီးနောက် အစုလိုက်အတွက် 15-20 အလုပ်လုပ်ရက်။5. ပရောဂျက်သည် အတွေ့အကြုံရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်သည် ကင်ညာလေဆိပ်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လမ်း၊ စပိန်လမ်းမီး၊ စပိန်ကားရပ်နားရန်နေရာ အစရှိသည့် ပရောဂျက်များကို အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့သည်။လျှောက်လွှာများ:စည်လမ်းများ၊ အဝေးပြေးလမ်းများ၊ မြင့်မားသောလမ်းများ၊ လမ်းများ၊ တံတားများ၊ လူသွားစင်္ကြံများနှင့် အခြားလမ်းအလင်းရောင်များအပြင် ရင်ပြင်များ၊ ကျောင်းများ၊ ပန်းခြံများနှင့် အခြားပြင်ပအလင်းရောင်လိုအပ်ချက်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။
အားကစားကွင်း အလင်းရောင်အတွက် စိတ်ကြိုက် အားကစားကွင်း ဦးဆောင်သော ရေလွှမ်းမိုးမီး CHZ-FL32 ထုတ်လုပ်သူ China မှ | CHZ
အားကစားကွင်းအလင်းရောင်အတွက် ပြင်ပအားကစားကွင်းကို ဦးဆောင်သည့် CHZ-FL32 ဈေးကွက်တွင် အလားတူထုတ်ကုန်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ၎င်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်၊ အရည်အသွေး၊ အသွင်အပြင်စသည်တို့တွင် ပြိုင်ဘက်ကင်းသော အားသာချက်များရှိပြီး စျေးကွက်တွင် နာမည်ကောင်းရရှိထားသည်။ CHZ သည် ချို့ယွင်းချက်များကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။ ယခင်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၎င်းတို့ကို စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်စေသည်။ အားကစားကွင်းအလင်းရောင်အတွက် Outdoor sports field led flood light ၏ သတ်မှတ်ချက်များသည် CHZ-FL32 ကို သင့်လိုအပ်ချက်အရ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။CHZ Professional အရည်အသွေးမြင့် အားကစားကွင်းအလင်းရောင်အတွက် CHZ-FL32 ထုတ်လုပ်သူ တရုတ်နိုင်ငံမှ၊ စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်ဝယ်လိုအားကို ဦးတည်ချက်အဖြစ် အမြဲလိုက်နာပြီး ထုတ်ကုန်အသစ်များကို အဆက်မပြတ်တီထွင်နေပါသည်။ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များA. အလွန်ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းပုံစံ၊ 1 မှ5modules များစုဝေးခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ရိုးရှင်းပါသည်။B. ရေတိုင်ကီကို 6063 လေကြောင်းအလူမီနီယမ်ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ကောင်းသောအပူကို ပြေပျောက်စေပါသည်။C. module ကို0မှ 180° လှည့်နိုင်ပြီး irradiation angle ကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိနိုင်သည်။D. မီးအိမ်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အထူးဖြန်းဆေး၊ ဆားဖြန်းချေးဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် သင့်လျော်သည်။E. အရည်အသွေးမြင့် SMD3737 သို့မဟုတ် SMD3030 ဆီမီးပုတီးများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ အရည်အသွေးမြင့် စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက်၊ တည်ငြိမ်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တာရှည်သက်တမ်း၊ အလုံးစုံကာကွယ်မှုအဆင့်သည် IP66 သို့ရောက်ရှိသည်။F. မြင့်မားသော transmittance PC မှန်ဘီလူး၊ 10° / 25° / 40° / 60° / 90° နှင့် အခြားသော အလင်းဖြန့်ဖြူးထောင့်များသည် ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ မတူညီသော အပလီကေးရှင်းအခြေအနေများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး Quality အလူမီနီယံ Led ဥယျာဉ်မီးအိမ် CHZ-GD29 ထုတ်လုပ်သူ | CHZ
အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး အလူမီနီယံ Led ဥယျာဉ်မီးအိမ် CHZ-GD29 ဈေးကွက်ရှိ အလားတူထုတ်ကုန်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်၊ အရည်အသွေး၊ အသွင်အပြင်စသည်ဖြင့် နှိုင်းယှဉ်၍မရသော ထူးထူးခြားခြား အားသာချက်များရှိပြီး စျေးကွက်တွင် နာမည်ကောင်းရရှိထားသည်။ CHZ သည် အတိတ်၏ချို့ယွင်းချက်များကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၎င်းတို့ကို စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်စေသည်။ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးလူမီနီယံ Led ဥယျာဉ်မီးအိမ်အလင်းရောင် CHZ-GD29 ၏သတ်မှတ်ချက်များကိုဖောက်သည်များအတိုင်းစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ 2020 စတိုင်သစ် LED ဥယျာဉ်မီး CHZ-GD29။ ၎င်း၏ ပြိုင်ဘက်ကင်းသော အားသာချက်များကြောင့်၊ ဤထုတ်ကုန်ကို စတင်ထုတ်လုပ်ပြီးကတည်းက သုံးစွဲသူများက နှစ်သက်ခဲ့ကြသည်။ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ1) မီးအိမ်တစ်ခုလုံး၏ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းသည်လှပပြီးရက်ရောသည်; တစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်းကို disassembled နိုင်သည်၊ အထုပ်သည်သေးငယ်ပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အဆင်ပြေသည်။2) မီးအိမ်ကိုယ်ထည်ကို အလူမီနီယမ်သတ္တုဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး သွပ်ရည်စိမ်ထားပြီး မျက်နှာပြင်ကို လျှပ်စစ်ဖြင့် ဖျန်းထားသည်။ သမားရိုးကျအရောင်များသည် မီးခိုးရောင်နှင့် အနက်ရောင်များဖြစ်သည် (Color Reference, RAL 9005/7015 RAL)၊ မျက်နှာပြင်သည် ချောမွေ့ပြီး ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။3) dual diffuser illuminance diffuser သည် အလင်းရောင်ကို ပိုမိုတူညီစေပြီး တောက်ပမှုမရှိဘဲ အလင်းရောင်ကို ပိုအဆင်ပြေစေသည်။4) မီးလုံးတစ်ခုလုံးသည် ကောင်းမွန်သောကာကွယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီး IP66 နှင့် IK09 သို့ရောက်ရှိသည်။ ၎င်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီး ပျက်စီးရန်မလွယ်ကူပါ။5) တင်သွင်းထားသော 3030E အလင်းအရင်းအမြစ်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော drive၊ တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှု၊ တောက်ပသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း၊လျှောက်လွှာများ:မြို့ပြလမ်းများ၊ ကားရပ်နားရန်နေရာများ၊ စက်ဘီးလမ်းသွယ်များ၊ ဥယျာဉ်များ၊ ပလာဇာများ၊ လူနေရပ်ကွက်များနှင့် အခြားပြင်ပနေရာများတွင် မီးအလင်းရောင်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။CHZ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး Led ဥယျာဉ်အလင်းရောင် CHZ-GD29 ကုမ္ပဏီ - CHZ ကုမ္ပဏီသည် ISO9001: 2015 အရည်အသွေးစနစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ISO14001: 2015 ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် ISO45001 လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးစနစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တို့ကို ကျော်ဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်။
အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော UFO led high bay light 100w 150w 200w လက္ကား CHZ-HB15 ထုတ်လုပ်သူ | CHZ
UFO ဦးဆောင်သော high bay light 100w 150w 200w လက်ကား CHZ-HB15 စျေးကွက်ရှိ အလားတူထုတ်ကုန်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ၎င်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်၊ အရည်အသွေး၊ အသွင်အပြင်စသည်ဖြင့် နှိုင်းယှဥ်သာလွန်ထူးခြားသော အားသာချက်များရှိပြီး စျေးကွက်တွင် နာမည်ကောင်းရရှိထားသည်။CHZ သည် ချို့ယွင်းချက်များကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။ ယခင်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၎င်းတို့ကို စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်စေသည်။ UFO led high bay light 100w 150w 200w လက္ကား CHZ-HB15 ၏သတ်မှတ်ချက်များသည် သင့်လိုအပ်ချက်အရ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။led high bay light UFO CHZ-HB15 သည် ရောင်းအားအကောင်းဆုံး led high-bay မီးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤမီးအိမ်သည် ဂန္ထဝင်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းပြီး အပူကို စုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၎င်းသည် PHILIPS 3030 အလင်းရင်းမြစ်ကို လက်ခံသည်၊ အလင်း၏ထိရောက်မှုမှာ 140lm/w၊ CRI 80 နှင့် အာမခံကာလ5နှစ်ဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး စျေးနှုန်းချိုသာ၍ ကျယ်ပြန့်သော လျှောက်လွှာအမျိုးအစားများ။ CHZ ကုမ္ပဏီသည် ဖောက်သည်များ၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကိုလည်း ချိန်ညှိနိုင်သည်။ led high bay light ကိုဝယ်ပါ၊ CHZ အလင်းရောင်သည်သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များA. ထူးခြားသောပုံစံဒီဇိုင်း၊ ပန်းကန်ပြားပျံပုံသဏ္ဍာန်၊ သန့်ရှင်းမှု။B. Sosen စီးရီးဒရိုက်ဗာကို အသုံးပြုပါ၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး တည်ငြိမ်မှုကောင်းမွန်သည်။C. Philips3030 LED ချစ်ပ်များD. Flat light၊ 60°/90° ချန်လှပ်ထားသော မတူညီသောထောင့်မှန်ဘီလူးဖြင့် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။E. နူးညံ့သောအပူဖွဲ့စည်းပုံ၊ လျင်မြန်သောအပူကိုစွန့်ထုတ်ခြင်း၊ အလင်းရောင်သည် ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန် 30 ℃ထက်မပိုစေဘဲ၊ တာရှည်ခံအလင်းရောင်အရင်းအမြစ်ကိုသေချာစေရန်။လျှောက်လွှာများ:စက်ရုံများ၊ ဂိုဒေါင်များ၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများ၊ လက်လီစတိုးဆိုင်များ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ နှင့် ကြီးမားသောမိုးလုံလေလုံအားကစားရုံနှင့် အခြားနေရာများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြပြီး ရိုးရာ HID နှင့် ပါဝါချွေတာသော မီးအိမ်များကို 60% ထက် ပိုချွေတာပါသည်။
2022 အားကစားရုံအသစ်အလင်းရောင်မော်ဂျူလာဦးဆောင်သောမီးထွန်းထုတ်လုပ်သူတရုတ်နိုင်ငံ | CHZ-FL41
2022 အားကစားရုံအသစ်အလင်းရောင်မော်ဂျူလာဦးဆောင်သောမီးထွန်းထုတ်လုပ်သူတရုတ်နိုင်ငံ | CHZDMX အသိဉာဏ်ထိန်းချုပ်မှုဖြေရှင်းချက် အားကစားကွင်းမီးများ CHZ-FL41။ စွမ်းအားမြင့် led ရေလွှမ်းမိုးမီး 400w -1800w၊ Racked angle သည် 270° အထိ တိကျသော တပ်ဆင်မှုကို ခွင့်ပြုသည်။
အကောင်းဆုံး စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော တရုတ်ရှုခင်း ပြင်ပထုတ်လုပ်သူများ - CHZ အလင်းထုတ်လုပ်သူများထံမှ တရုတ် | CHZ-GD01B တင်သွင်းသူ
ထုတ်လုပ်သူအပြင်ဘက်တွင် စိတ်ကြိုက်အကောင်းဆုံး တရုတ်ရှုခင်းများ｜Shanghai CHZ Lighting Co., Ltdထုတ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုကို QC အဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်သည်။ အဝင်ဗို့အား၊ အမ်ပီယာ၊ လျှပ်စီးကြောင်းဆန့်ကျင်နိုင်မှု အစရှိသည်တို့ အပါအဝင် ၎င်း၏ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။
ရောင်းရန်အကောင်းဆုံး led garden light Supplier& ထုတ်လုပ်သူ | CHZ အလင်းရောင် စက်ရုံစျေးနှုန်း - CHZ
hot sale led garden light Supplier& ထုတ်လုပ်သူ | CHZ အလင်းရောင်။ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးဆောင်အလင်းရောင်ထုတ်ကုန်သည် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေး | CHZ-GD34 ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းတိုင်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ဒီဇိုင်းတိုင်းသည် လေထုညစ်ညမ်းမှုကို တတ်နိုင်သမျှ ဖယ်ရှားပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်စေမည်ဖြစ်သည်။
Europe ဒီဇိုင်း led garden light တစ်ခုရဖို့ ထိုက်တန်ပါသလား။ | ပေးသွင်းသည်။& ထုတ်လုပ်သူ | CHZ
ဥရောပ ဒီဇိုင်းဖြင့် ဆောင်ထားသော ပန်းခြံမီးကို ရယူရန် ထိုက်တန်ပါသလား။ | CHZ-GD01Aထုတ်ကုန်သည် ဂန္ထဝင်စတိုင်ရှိပြီး၊ အလင်းရောင်အခြေအနေအမျိုးမျိုးအတွက် သင့်လျော်သည်၊ တာရှည်ခံသောဝန်ဆောင်မှုနှင့် အာမခံကာလ5နှစ်အထိရှိသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဦးဆောင်သော ပြင်ပအလင်းရောင် တပ်ဆင်မှုများ ဥယျာဉ်မီးများ ထုတ်လုပ်သူ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဦးဆောင်သော ပြင်ပအလင်းရောင် တပ်ဆင်ရေးပစ္စည်းများ ပေးသွင်းသည့် တရုတ် - CHZ အလင်းရောင်SHANGHAI CHZ LIGHTING COMPANY သည် အတွေ့အကြုံ 10 နှစ်ကျော်ရှိသည့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် LED မီးများ၏ ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ CHZ LIGHTING တွင် လူငယ်နှင့် အဆင့်မြင့် R တစ်ခုရှိသည်။&D အဖွဲ့၊ ၎င်းတို့သည် ထုတ်ကုန်အသစ်များကို ဆက်လက်ဖန်တီးနေပြီး သုံးစွဲသူများအား ပရောဂျက်ဖြေရှင်းချက်များကို တက်ကြွစွာ ကမ်းလှမ်းသည်။
စိတ်ကြိုက် အရည်အသွေးမြင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဦးဆောင်သော လမ်းမီး အတန်းအစား I/class II CHZ-ST12 | တရုတ်နိုင်ငံမှ CHZ ထုတ်လုပ်သူ
ထိပ်တန်း အရည်အသွေး ကျွမ်းကျင်သော လမ်းဘေးမီး အမျိုးအစား I/class II CHZ-ST12 ထုတ်လုပ်သူ | CHZ စျေးကွက်ရှိ အလားတူထုတ်ကုန်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ၎င်းတွင် စွမ်းဆောင်ရည်၊ အရည်အသွေး၊ အသွင်အပြင်စသည်ဖြင့် နှိုင်းယှဉ်၍မရနိုင်သော ထူးထူးခြားခြား အားသာချက်များရှိပြီး စျေးကွက်တွင် နာမည်ကောင်းရရှိသည်။ CHZ သည် ယခင်ထုတ်ကုန်များ၏ ချို့ယွင်းချက်များကို အကျဉ်းချုပ်ပြီး ၎င်းတို့ကို စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်စေသည်။ ထိပ်တန်းအရည်အသွေး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဦးဆောင်သော လမ်းမီး အတန်းအစား I/class II CHZ-ST12 ထုတ်လုပ်သူ | CHZ ကို သင့်လိုအပ်ချက်အရ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အကောင်းဆုံး အတန်းအစား I/class II led လမ်းမီး CHZ-ST12အင်္ဂါရပ်များ:1. ယေဘူယျအားဖြင့် အလူမီနီယံသေတ္တာ၊ အပူစုပ်ရေယက်များ၊ အပူကို ကောင်းစွာစုပ်ယူခြင်း။2. UL စံနှုန်းလော့ခ်ကို အသုံးပြုပါ၊ အလုံးစုံဖွဲ့စည်းပုံသည် ကျစ်လစ်ပြီး ဆန်းပြားသော ဒီဇိုင်းလက်ရာဖြစ်သည်။3. သတ္တုချိတ်ဆက်မှုအပိုင်း၊ သံမဏိအားလုံး၊ သံချေးတက်ခြင်း၊ တာရှည်ခံခြင်း။4. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မှန်ဘီလူးဒီဇိုင်း၊ မတူညီသောအလင်းရောင်လိုအပ်ချက်များအတွက် မတူညီသောထောင့်လေးခု။5. 0° မှ 90° မှ ချိန်ညှိနိုင်သော မီးချောင်းထောင့်သည် ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော၊ အပေါ်မှ တင်ခြင်းအား လွတ်လပ်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။6. Philips5050 သို့မဟုတ် 3030 ချစ်ပ်များနှင့် MW ဒရိုက်ဘာကို အသုံးပြု၍ တည်ငြိမ်သော အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်၊ သက်တမ်း 90,000 နာရီအထက်။လျှောက်လွှာများ:အဝေးပြေးလမ်း၊ အမြန်လမ်း၊ စလစ်လမ်းနှင့် အခြားအများသုံး မီးထွန်းရာနေရာများအပါအဝင် လမ်းမီးအလင်းရောင်အတွက် အဓိကအသုံးပြုသည်။
CHZ အလင်းရောင် RGB RGBW ပတ်ပတ်လည် LED ရေလွှမ်းမိုးအလင်း AC220V / DC24V ON-OFF ထိန်းချုပ်မှု CHZ-FL30C
CHZ အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး RGB RGBW ပတ်ပတ်လည် ဦးဆောင်သော ရေလွှမ်းမိုးမှု မီးအလင်းရောင် AC220V / DC24V ON-OFF ထိန်းချုပ်စက်ရုံ၊ 2018 ခုနှစ်တွင် ရှန်ဟိုင်းရှိ အထူးကောင်းမွန်သော ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း" နှင့် "2018 ခုနှစ်တွင် ရှန်ဟိုင်းရှိ Little Giant Enterprise"CHZ စက်ရုံမှထုတ်လုပ်သော အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး RGB LED ရေလွှမ်းမိုးသောအလင်းအဝိုင်းသည် အောက်ပါလက္ခဏာများရှိသည်။Fluid mechanics ဒီဇိုင်း၊ လက်ရာမြောက်ပြီး လှပသော မီးအိမ်ပုံစံ။2. ကော်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောရေစိုခံဒီဇိုင်း၊ အကာအကွယ်အဆင့် IP66၊3. အလူမီနီယမ်မီးခွက်ကိုယ်ထည်၊ SUS304 သံမဏိဝက်အူများ၊ မျက်နှာပြင်လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြန်းခြင်း၊4. ကောင်းမွန်သောအလင်းရောင်နှင့် အရောင်စွမ်းဆောင်မှုရရှိရန် OSRAM 3030 အရည်အသွေးမြင့် ချစ်ပ်များကို စီစဉ်သတ်မှတ်ပါ။5. High light-transmittance optics သည် ထိရောက်စွာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။ တောက်ပမှု ဆန့်ကျင်သော အရိပ်အပြားကို ရွေးချယ်နိုင်သည် ။လျှောက်လွှာများ:စျေးဝယ်စင်တာများ၊ ပြပွဲခန်းမများ၊ ကားရပ်နားရန်နေရာများ၊ တံတားများ၊ ကြော်ငြာဘုတ်များ၊ ပန်းခြံများ၊ ပန်းပုများနှင့် စသည်တို့တွင် အသုံးများသည်။
CHZ အလင်းရောင် စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသော မော်ဂျူး ဦးဆောင်သည့် အလင်းတန်း R/G/B/W RGB အရောင် CHZ-FL30B
CHZ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသော မော်ဂျူးသည် တရုတ်နိုင်ငံမှ R/G/B/W RGB ရောင်စုံ ထုတ်လုပ်သူ ဦးဆောင်သော CHZ သည် Shanghai Jiading Nanxiang Welfare Institute နှင့် Tibet Children's Welfare Foundation ကဲ့သို့သော ပရဟိတအဖွဲ့များသို့ အလှူငွေများ တက်ကြွစွာ လှူဒါန်းခဲ့ပြီး Jiading ခရိုင်၊ ရှန်ဟိုင်းတွင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။ . 2020 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကုမ္ပဏီသူဌေးသည် နှာခေါင်းစည်းများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများ၊ အကာအကွယ်အ၀တ်အထည်များနှင့် အခြားပစ္စည်းများလှူဒါန်းရန် Hubei သို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမောင်းလာပြီး Shanghai မှ "Advanced Individual in Fighting" ကို ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ CHZ သည် ထုတ်ကုန်များအတွက်သာ တာဝန်ရှိသည်သာမက လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံနှင့် အနာဂတ်အတွက်ပါ တာဝန်ယူနိုင်သော ကောင်းမွန်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။စိတ်ကြိုက် module ဦးဆောင်သည့် အလင်းတန်း R/G/B/W RGB အရောင် CHZ-FL30B အင်္ဂါရပ်များ-1. Fluid mechanics ဒီဇိုင်း၊ လက်ရာမြောက်ပြီး လှပသော မီးအိမ်ပုံစံ။2. ကော်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောရေစိုခံဒီဇိုင်း၊ အကာအကွယ်အဆင့် IP66၊3. အလူမီနီယမ်မီးခွက်ကိုယ်ထည်၊ SUS304 သံမဏိဝက်အူများ၊ မျက်နှာပြင်လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြန်းခြင်း၊4. အလွန်ကောင်းမွန်သောအလင်းရောင်နှင့် အရောင်စွမ်းဆောင်မှုရရှိရန် OSRAM 35305 အရည်အသွေးမြင့် ချစ်ပ်များကို စီစဉ်သတ်မှတ်ပါ။5. High light-transmittance optics သည် ထိရောက်စွာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။ တောက်ပမှု ဆန့်ကျင်သော အရိပ်အပြားကို ရွေးချယ်နိုင်သည် ။6. မိုနိုခရုမ်(R/G/B/W) သို့မဟုတ် အရောင်အပြည့်အစုံ (RGBW) ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ DMX512 ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကို ပံ့ပိုးသည်။လျှောက်လွှာများ:စျေးဝယ်စင်တာများ၊ ပြပွဲခန်းမများ၊ ကားရပ်နားရန်နေရာများ၊ တံတားများ၊ ကြော်ငြာဘုတ်များ၊ ပန်းခြံများ၊ ပန်းပုများနှင့် စသည်တို့တွင် အသုံးများသည်။
ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် : Jolina
ဖုန်း : +86 2169898169
အီးမေးလ် : Sales@chz-lighting.com
လိပ်စာ : No.581, Xiangjiang Road,Shanghai, China
CHZ Lighting တွင် အရောင်းကို ဆက်သွယ်ပါ။
မူပိုင်ခွင့် © 2021 Shanghai CHZ Lighting Co., Ltd.